Uhlu lwamazwe akhethiwe we-FATF | Amazwe avunyelwe yi-FATF, Amazwe Abeka Ubungozi E-FATF, Uhlu lwamazwe e-FATF
Uhlu Lwamazwe Asetshenzisiwe lwe-FATF
Ubungozi obukhulu, obhekelwe futhi ongabambisani
Nathi ngokwethu noma ngezinhlangano zethu, abalingani bethu, abahlangene nathi, abeluleki kanye nabathengisi bezokuvakasha bavumela imikhiqizo yethu nezinsizakalo zethu ukuthi zisetshenziswe ngokuqondile noma ngokungaqondile emazweni ashiwo ngezansi.
Uhlu lwamazwe luvuselelwa ngezikhathi ezithile futhi luposwe kusixhumanisi esishiwo ngezansi.
Amazwe wesithathu asengozini enkulu, angaphakelwa yithi:
IDemocratic People's Republic of Korea (DPRK)
Abathengisi bokuhlala abasemazweni afakwe kuhlu ngeke basekelwa inkonzo yethu.
Uhla lwamazwe asengozini enkulu lubekwe kusheduli 3ZA yeMithetho Yokushushumbisa Imali, Izimali Zamaphekula kanye Nokudluliswa Kwezimali (Ulwazi Ngomkhokhi) Imithethonqubo ka-2017.
Uhlu lwachitshiyelwa ngoJulayi 2021 ngumthethonqubo 2 weMoney Laundering and Terrorist Financing (Amendment) (No 2) (Amazwe Asengozini Ephezulu) Imithethonqubo 2021.
Amazwe wesithathu angama-24 asengozini enkulu yile:
Qaphela * I-FATF ikhomba izindawo ezinamandla nezilinganiso ezingekho endaweni yokuhlonza nokulwa nokuthathwa kwemali kanye nokuxhaswa ngezimali kwamaphekula (CFT / AML) futhi ikhiphe imibhalo emibili ye-FATF yawo wonke umuntu futhi le mibhalo ikhishwa kathathu minyaka yonke. AbakwaFATF bamemezela uhlu lwamazwe lawo wonke umuntu ontulayo / obuthakathaka, umbuso weCFT / AML ukhombisile ukuthi uyasebenza. Kusukela ngo-Okthoba 2018, i-FATF ibuyekeze amazwe angaphezu kwama-80 futhi yakhomba esidlangalaleni angama-68 kuyo. Emazweni angama-68, amazwe angama-55 selokhu athatha izinyathelo ezidingekayo ukubhekana nobuthakathaka bawo be-CFT / AML futhi asusiwe ohlwini. Umthombo * fatf-gafi.org